मंगलवारदेखि अघोषित लूजडाउन, काठमाडौं उपत्यकामा के के गर्न पाइन्छ ? – Sandesh Press
June 14, 2021 264
काठमाडौं । एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाडौं उपत्यकामा मंगलवारदेखि लूजडाउनको नीति लागू हुने भएको छ ।
केही क्षेत्रलाई खुला गरेर उपत्यकाको जनजीवन र दैनिकीलाई क्रमशः सामान्यकरण गर्दै लैजाने नीति बनाइएको छ ।
आइतबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुन् । तर साबिकको भन्दा थप गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराइले बताउनुभयो ।
मंगलवारदेखि खाद्यान्न, तरकारी, किराना पसल, फलफूल र पुस्तक पसल बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइने छ । यस्तै विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने पसल (हार्डवेयर)लाई बेलुका चार बजेदेखि खुल्न दिने निर्णय भएको छ ।
होटल र रेष्टुराँहरुलाई ‘टेक अवे’ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी खोल्ने अनुमति दिइएको छ । अनलाइन डेलिभरीका लागि होटलहरूले बिहान ७ बजेदेखि काम गर्न पाइने प्रजिअ भट्टराइले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विकास निर्माणका काममा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मजदूरहरू राख्न पाइने भएको छ । यस्तै वर्कसपहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्मै खोल्न पाइने निर्णय भएको छ ।
एम्बुलेन्स, शव बाहनलगायत स्वास्थ्य सेवामा खटिने सवारी साधनका लागि परिचय पत्र देखाउन नपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अन्य अत्यावश्यक सेवाका यातायातका साधन पनि आफ्नो कार्यालयद्वारा जारी परिचय पत्र वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पासका आधारमा सञ्चालन गर्न दिइने छ ।
पहिले जिल्लामा दुई वटा बैंकका शाखा सञ्चालन गर्न दिइएकोमा यसमा पनि केही सहजकिरण गरिएको छ । सहकारीका लागि सातामा दुई दिन खोल्न दिने निर्णय भएको छ। बैंकहरूको अरू शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियम ल्याउने छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विहान र बेलुकी पैदल यात्रामा जान पनि प्रशासनले अनुमति दिएको छ ।
कृषिजन्य कामका लागि मल ढुवानी र बीऊ बिजनका पसलहरू पनि खुल्न दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी कूटनीतिक निकायबाट जारी हुने भिसा, परीक्षा र अन्तर्वार्ता पनि खुला गरिएको छ ।
उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उल्लेखनीय रूपमा नघटेसम्म निषेधाज्ञालाई कायम राख्ने सरोकारवाला निकायको सिफारिस बमोजिम निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको भट्टराईले बताउनुभयो । तर सार्वजनिक सवारीका साधन भने तत्काल नखुल्ने बताइएको छ । संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झरेपछि मात्र जोरबिजोर प्रणालीद्वारा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा छलफल भने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पाँच प्रतिशतमा संक्रमणदर घटेपछि निषेधाज्ञा हटाउने प्रचलन रहेको छ । तर उपत्यकामा संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झरेपछि निषेधाज्ञा हटाउने प्रशासनको योजना रहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
Prevविरामी निशालाई भेट्दा आँचल शर्मा स्तब्ध ! धेरै पछि भेट्दा देखियो नसोचेको परिवर्तन
Nextपैसा राख्ने दराजमा राख्नुहोस् यो खास चिज, दोब्बरले बढ्छ आम्दानी !